Ungakwazi ukuqeqesha inkumbulo yakho? | Ukuqeqeshwa kwengqondo
Ucwaningo lwabashayeli bamatekisi baseLondon lukhombisa ukubaluleka kokuvivinya inkumbulo njalo nokuphindaphindwayo.
Ulapha: Ikhaya » Ochwepheshe » Izihloko » Neuropsychology » Ungakwazi ukuqeqesha inkumbulo yakho?
Cishe wonke umuntu empilweni uye wabhekana nokukhungatheka ngenxa yokukhohlisa inkumbulo yethu. Njengoba sibhekene nolwazi oluningi okufanele silukhumbule, kangaki siziqinisekise ukuthi sinenkumbulo emibi nokuthi asikwazi ukukwenza?
Abafayo abajwayelekile basebenzisana nsuku zonke ngemikhawulo yememori ebonakalayo kepha, ngokobufakazi obunqwabelwe eminyakeni yamuva, izinto akudingeki bahlale kanjalo.
Ucwaningo oluthokozisayo olwenziwe kubashayeli bamatekisi baseLondon luveze ukuthi ubuchopho buguquka kanjani ngemuva kokuvivinya kaningi nangokuzivocavoca kakhulu.
Akuwona wonke umuntu owaziyo ukuthi ukuze ube ngumshayeli wetekisi eLondon kuyadingeka ukuthi uphumelele isivivinyo esinzima kakhulu lapho lowo ozobhapathizwa kumele akhombise ukuthi uyakwazi ukusuka kunoma iyiphi indawo aye kwelinye edolobheni ukwazi yonke imigwaqo ngenhliziyo (cishe 25.000). Ocwaningweni olwenziwe ngenhla, ubuchopho babafundi bezikena buzoskenwa ukuthola izinguquko ezenziwa ngumsebenzi wokutadisha ojulile. Umphumela waba ukuguqulwa (ukwanda kwempunga) engxenyeni ye-hippocampus, indawo yobuchopho unqume kokutholwa (futhi kungenzeka futhi ekululameni) ulwazi olusha kwimemori.
Kulokhu kwenezelwa idatha eminingi yokuhlola eqoqwa njalo maqondana nokusebenza kwe ukuqeqeshwa kwenkumbulo (zezinhlobo ezahlukahlukene). Kufanele futhi kuqashelwe ukuthi eziningi zalezi zifundo zenziwa kubantu asebekhulile, amakhono abo okucabanga ngawo ama-mmnemonic acatshangelwe (kuze kube iminyaka embalwa edlule) ukuthi angathuthukiswa. Ngakho-ke yini inkumbulo efanelekile futhi engaguquki engayenza kubantu abasha? Yiziphi izimo ezingabonwa esikoleni sekusasa?
Imemori, i-IQ neminye imisebenzi ekhombisa ukuqonda ukuthi ungayiqonda kanjani uma incipha
UWoollett K., Maguire EA, 2011. Ukuthola “Ulwazi” lweLondon Layout Drives Structural Brain Changes yaseLondon. I-Biology yamanje. 21 (24-2): 2109 - 2114
yokufunda, inkumbulo, esitolo, ukuqeqeshwa
Ungakwazi ukuqeqesha inkumbulo yakho?2015-03-242020-02-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2015/03/11072997_10153253750370955_1275626774_n.jpg200px200px
Ukuhlolwa kwengqondo kubikezela ingozi yokufa ngemuva kokushaywa unhlangothiI-Stroke, Neuropsychology